Intengiso yedijithali kunye nefuthe leVidiyo | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 10, 2014 Douglas Karr
Ngale ntsasa sihambise iingxelo komnye wabathengi bethu ebenathi iminyaka embalwa. Banesiza esikhulu esonyuswe kwizithuthi ezifanelekileyo malunga ne-200% kunyaka ophelileyo kwaye banee-infographics kunye namaphepha amhlophe okurhwebesha abathengi ukuba babhalise kwaye baqale ukujonga isisombululo sabo. Ekuphela kwento esiyifumanayo ilahlekile kwindawo yabo sisiqulatho sevidiyo. Siyazi, okokuqala, ukuba ividiyo kufuneka ngoku kuyo nayiphi na inkampani enqwenela ukukhuphisana kwi-Intanethi.
le infographic evela AbaVi beVidiyo ipeyinta umfanekiso ocacileyo ngokubhekisele kwimpembelelo yevidiyo kwintengiso yakho yedijithali iyonke. Izibalo ziyothusa:
Ngama-63% abaphathi abaphezulu abatyelele indawo yabathengisi emva kokubukela ividiyo.
Iividiyo kwiindawo zentengiso igcine iindwendwe umyinge wemizuzu emi-2 ubude, yaguqula ngaphezulu kwe-30% kwaye yonyusa umndilili wokuthengiswa kwetikiti nge-13%.
I-68% yabathengisi abaphezulu ngoku Sebenzisa ividiyo njengenxalenye yesicwangciso sabo sentengiso yedijithali.
Ividiyo elungiselelwe yonyusa ithuba lokuba uphawu lwakho lube kwi iphepha langaphambili likaGoogle Iziphumo zeinjini yokukhangela ngamaxesha angama-53!
I-85% yabathengi kunokwenzeka ukuba benze ukuthenga emva kokubukela ividiyo yeemveliso.
tags: ukuthengiswa kwedathaIvidiyo ye-ecommerceIvidiyo ecacisayoIividiyo ezichazayochaza iividiyoIiVidiyo zeNtengisoImveliso yevidiyoIvenkile yevidiyoizinga lokuguqula ividiyoividiyo seo
Mar 30, 2017 ngo-10: 56 AM
Esona sizathu siphambili soku kugqabhuka kwemfuno kungenxa yobuchwephesha bethu obukhula rhoqo. Wonke umntu unee-smartphones apho banokubukela iividiyo ekuhambeni. Kwaye ekubeni zikholisa ngokwenene ngenxa yobuhle kunye nezinye izinto, abantu badla ngokuthenga ngakumbi emva kokubukela iividiyo. Inqaku elihle ngendlela, nokuba lidala.